Clomiphene Citrate (Clomid) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekitori
Clomiphene citrate powder ndiyo ndiyo yakanyanya kushandiswa kurapwa kwekuwedzera kwekuwedzera kwemakore ekupedzisira e40. Clomiphene yaive yakashandura mberi mune mishonga yekubereka uye nokukurumidza ikave yakakurumbira pakugadziriswa kwechivigiro nekuda kwekusununguka kwehutungamiri uye zvishoma nezvigumisiro. Zvisinei, letrozole, anromatase inhibitor, inobatsirawo kuvhara mazai muvakadzi vane polycystic ovary syndrome (PCOS). Nhamba iripo inoratidza kuti kurarama kwemararamiro akareba zvakakosha ne letrozole kupfuura clomiphene, uye nyanzvi dzakawanda zvino dzinoti letrozole seyokutanga mazita ekurapa kwevakadzi vanorwara neCPOS.
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) video
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) Tsanangudzo
Clomiphene Citratrate inoshandiswa kurapa kusabatwa kwevakadzi. Inoshanda kuburikidza nekukurudzira kuwedzera kwehuwandu hwemhomoni inotsigira kukura nekusunungurwa kweii rinokura (ovulation). Iyi mishonga haina kukurudzirwa kuvakadzi avo mazamu avo haasisiri mazai zvakakodzera (kupera kwepituitary kana ovarian kusakwanisa).
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder inoratidzwa mumuromo, kwete steroidal, ovulatory stimulant iyo inoshandiswa sechisarudzo chestrogen receptor modulator (SERM). Clomifene inogona kutungamirira kuhutano hwakawanda, uye saka kuwedzera mukana wekubata mapatya. Mukuenzanisa nekunatswa kweFSH, chiyero che ovarian hyperstimulation syndrome ishoma. Ikoko kunogona kuva nehuwandu hwehutano hwekenza yemaawa uye uwandu hwekuwedzera. Clomifene inokwanisa kuwirirana ne estrogen-receptor-ine mishonga, kusanganisira hypothalamus, pituitary, ovary, endometrium, mukadzi, uye chibereki. Inogona kukwikwidzana ne estrogen yeestrogen-receptor-binding sites uye inogona kunonoka kugadziriswa kwe intracellular estrogen receptors. Clomifene inotanga mutsara wezviitiko zvekupedzisira zvinogumira muhutano hwekutanga hwegonadotropin uye hutsika hunotevera hunobuda. Chokutanga chekupedzisira, pakupindira kune imwe nzira yechirwere chinonzi clomifene, inowedzera mukubudiswa kwepituitary gonadotropin. Izvi zvinotanga steroidogenesis uye folliculogenesis zvichikonzera kukura kwehupfumi hwemashizha uye kuwedzerwa kwehuwandu hwezveseriol. Kutevera kuvhara, plasma progesterone uye estradiolsi inomuka uye inowira sezvayaizoita muhutano hwemazuva ose.
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) Specifications
Product Name Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9)
Kemikari Name Clomifene citrate; Clomid
muchiso Name Clomid
Kirasi yeMishonga sarudza estrogen receptor modulator (SERM)
Molecular Wsere 598.089 g / mol
Monoisotopic Mass 597.213 g / mol
Kunyorera Point 116.5-118 ° C
Biological Half-Life 5-7days
Solubility Zvishoma zvisinganyunyuti mumvura, methanol, chloroform (zvishoma), uye DMSO (10 mM). Inoputika mu ether.
chengetedzo Temperature 2-8 ° C
APane yakashandiswa kurapa kushaya vana muvakadzi
Clomiphene Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9)?
Clomiphene citrate powder ndeyechirwere chekuvhara muviri. Vanachiremba vanowanzotaurira mishonga iyi kurapa kusabereka kwevakadzi.
Clomiphene citrate powder inoshanda nenzira yakafanana kune isrogen, iyo inomukadzi weshure hormone. Kutora ichi chirwere kunokurudzira kuvhara, kana kusunungurwa kweii kubva mavhavha. Izvi zvinogona kubatsira kusimbisa kubereka kwevakadzi vanoomerwa nekukanganwa nekuda kweizvi nehutachiona.
Iro Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) mabasa
Clomiphene inokonzera hutano hweputiitary gland kuvhara huwandu hwakawanda hwehutoriki hunokonzera hormone (FSH) uye LH (luteinizing hormone). Ichi chiito chinokurudzira kukura kwehupfumi hwemashizha uye naizvozvo inotanga kuvhara.
Munguva yekuenda kumwedzi kwemazuva ose chete yega inotemwa. Kushandiswa kwema clomiphene kunowanzoita kuti mazai aite mazai maviri kana matatu mairi. Clomiphene inotorwa nemazano kwemazuva 5 uye inoshanda chete mumwedzi iyo inotorwa.
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) Dosage
Kuita Kuti Vanhu Vakuru Vose Vakuvheneke Kuchengetedza:
50 mg muromo kamwechete pazuva kwezuva 5. Therapy inofanira kutanga pamusana pezuva re5th yekuenda kumwedzi, asi inogona kutanga chero nguva muvarwere vasina ikozvino kubuda ropa.
Kana kuvharidzika kuchiitika uye pamuviri hauna kubudirira, kusvika kune 2 zvimwe zvidzidzo zve clomiphene 50 mg muromo kamwechete pazuva kwezuva 5 inogona kutarisirwa. Nzira imwe neimwe inotevera inogona kutanga sekutanga kwemazuva 30 mushure mokutanga uye mushure mokunge musikana abviswa.
Vakawanda varwere vanovhiringidza kutevera nzira yekutanga yekurapa. Zvisinei, kana murwere asingakwanisi kuvhara, imwe yechipiri ye100 mg / zuva kwemazuva 5 inogona kupiwa mushure memazuva e30 achitevera kokutanga. Nzira yechitatu ye 100 mg / zuva kwemazuva 5 inogona kupiwa mushure mezuva re30, kana zvichifanira.
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9) tizvishandise
Clomiphene citrate / Clomid powder inoshandiswa kurapa kusabatwa kwevakadzi. Inoshanda kuburikidza nekusimudzira kuwedzera kwehuwandu hwemhomoni inotsigira kukura nekusunungurwa kweii yakakura (ovulation). Iyi mishonga haina kukurudzirwa kuvakadzi avo mazai avo haasisiri mazai zvakanaka (kupera kwepituitary kana ovarian kusakwanisa).
Tenga Clomiphene Citrate (Clomid) powder kubva kuBuasas.com